सभामुखले पिएको मदिराको मूल्य कति? -
सभामुखले पिएको मदिराको मूल्य कति?
१४ आश्विन २०७६, मंगलवार २०:१० 236 पटक हेरिएको
काठमाडौँ । सभामुख कृष्णबहादुर महराले मदिरा सेवन गरेर आफूमाथि जबर्जस्ती गरेको संसद सचिवालयकी महिला कर्मचारीले बताएकी छिन् । ती महिलालाई जबरजस्ती गर्नु अघि महराले मदिरा सेवन गरेको उनले बताएकी छिन् । सभामुख महराले ती महिलासँग पिएको रक्सीको मूल्य न्युनतम २४ देखि २८ सयसम्म पर्छ ।
यो मूल्य ७५० एमएलको बोतलको दररेट हो । ४२.८ प्रतिशत अल्कोहल मिसिएको यो रक्सी १२ वर्ष पुरानो ब्राण्ड हो। भने स्कच माल्ट क्वालिटीको यो रक्सीको स्प्रिट स्कटल्याण्डबाट ल्याएर हिमालको पानी मिसाएर बनाउने गरिएको वेबसाइटमा उल्लेख छ ।
आइतवार साँझ महरा स्वयं स्न्याक्सपनिको बोतलसहित ति महिला संसद्को डेरामा पुगेका थिए। रक्सि दुईओटा गिलासमा राखिएको भएपनि महराकै दबाबमा महिलाले एकै गिलासमा रक्सि पिएका थिए।
किन गर्छ भारतले नेपाली